Chii chinonzi Pe zvemapepa mapepa?
1: Zvinoreva Pe zvemapuranga mapepa 2: Basa uye mashandisirwo Akaenzaniswa neakajairika bepa, ine mvura nemafuta kuramba. Inonyanya kushandiswa kugadzira chikafu ...
Nhanho diki Musiyano mukuru- Bio Bhodhi
Tsika PE kudzokororazve 一: Nyika yehunyanzvi zvinhu Kudzokorodza 1.kuunganidza 2.sorting 3.shredding 4.washing 5.melting and pelletizing 2. Iyo inodhura-inoshanda uye inoshanda zvekare ...
nezve ningbo fold, ungangoda kuziva chimwe chinhu
ne admin pane 21-03-24
Hei, kutanga ndinonyatsonzwisisa zvaunonetsekana uye chikonzero, nekuti unogara uri wekupedzisira vatengi vebepa pamberi .Uye pane mamwe mapoinzi pazasi ndinoda kujekesa zvakajeka kwauri, zvisinei uine bhizinesi nesu kana kwete. 1: "NINGBO FOLD" C1S nyanga dzenzou ndeye ...
Yakareba fiber yakazara huni pulp bepa
ne admin pane 21-02-03
Yakareba fiber yakazara huni pulp bepa yakajairwa huni pulp bepa rinoshandiswa mukugadzira maitiro ipfupi fiber pulp, asi isu tinoshandisa iyo yakareba fiber pulp, yakasimba tensile ka5 zvirinani kupfuura ipfupi fiber! Yakasimba kuomarara uye yakasimba kuputsa kuramba refu fiber kwete chete ine ...
Nhanganyaya Nezve Pepa
Nhanganyaya PAMUSORO PAPA 1: Bepa reoffset mapepa anonyanya kushandiswa kudhinda lithographic (offset) kana mimwe michina yekudhinda kudhinda zvakadarikidza zvigadzirwa zvemavara, senge mapepanhau anevaravara, mabhuku emifananidzo, maposta, mavara ekudhinda uye ...
Nhanganyaya ZVEPAPA Pepa rekununura iro bepa hombe rinoshandiswa mukudhinda mabhuku nemagazini. Inokodzera mabasa akakosha, sainzi uye mabhuku eetekinoroji, magazini ezvidzidzo uye zvekudzidzisa, senge zvinyorwa zvemavara. Rubatsiro pepa maererano nekuumbwa kwepa ...